Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » IATA waxay su'aal ka qabtaa baahida loo qabo baaritaannada qaaliga ah ee PCR
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Qiimaha sare ee imtixaanada PCR wuxuu si xun u saameynayaa soo kabashada safarka caalamiga
Duulista Hawaii waxay u baahan tahay PCR COVID - 19. Tani waa ganacsi weyn dad badan, oo ay ku jiraan shirkadaha sida Longs Drugs, Walgreens, iyo kuwo kaloo badan. Qiimaha $ 110- $ 275 ee baaritaanka qasabka ah ee looga fogaanayo karantiilku wuxuu noqon karaa mid culus oo niyad jab ku ah qoysaska. IATA way ogtahay in tani aysan waxtar lahayn marka la isku dayayo in dadku ay mar kale duulaan.
Shuruucdu waa isku dhac iyo wareer. Imaatinka Mareykanka micnaheedu waa baaritaan qaali ah oo antigen ah oo qaali ah inta badanna lagu socdo Hawaii, marar badan oo qaali ah baaritaanka PCR ayaa loo baahan yahay.
Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Cirka (IATA) wuxuu ugu yeeray dowladaha inay wax ka qabtaan wax ka qabashada qiimaha sare ee imtixaanada COVID-19 ee xukumado badan waxayna ku boorisay dabacsanaanta ogolaanshaha isticmaalka tijaabooyinka antigen-ka waxtarka u leh ee beddelka u ah tijaabooyinka PCR-ka ee qaaliga ah.
IATA waxay kaloo kula talisay dowladaha inay korsadaan hagitaan dhowaan Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) in laga fiirsado ka dhaafida safrayaasha la tallaalay shuruudaha baaritaanka.
Marka la eego sahankii ugu dambeeyay ee socdaalka ee IATA, 86% jawaabeyaasha ayaa diyaar u ah in la tijaabiyo. Laakiin 70% sidoo kale waxay rumaysan yihiin in kharashka imtixaanku uu caqabad weyn ku yahay safarka, halka 78% ay aaminsan yihiin inay tahay inay dawladuhu qaadaan kharashka imtixaanka khasabka ah.
"IATA waxay taageertaa baaritaanka COVID-19 oo ah waddo dib loogu furayo xuduudaha safarka caalamiga ah. Laakiin taageeradayada ayaan shuruud la’aan ahayn. In lagu kalsoonaan karo ka sokow, imtixaanku wuxuu u baahan yahay si fudud loo heli karo, la awoodi karo, kuna habboon heerka halista. Dawlado aad u tiro badan, si kastaba ha noqotee, waxay ku dhacayaan qaar ama dhammaan kuwan. Qiimaha imtixaanku aad buu ugu kala duwan yahay inta u dhexeysa maamullada, iyadoo aan xiriir la lahayn qiimaha dhabta ah ee baaritaanka. Boqortooyada Midowday (UK) waa cunuga gadaashiisa dawladaha ku guuldareysta inay si ku filan u maareeyaan imtixaanka.
Marka ugu fiican waa qaali, marka ugu xun laga bixiyo. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa fadeexad in dowladda ay canshuurta VAT ka qaado, ayuu yiri Willie Walsh, agaasimaha guud ee IATA.
Jiilka cusub ee imtixaanada degdega ah wuxuu ku kacayaa wax ka yar $ 10 halkii imtixaan. Bixinta baaritaanka xaqiijinta rRT-PCR waxaa loo maamulaa natiijooyinka baaritaanka togan, hagida WHO waxay u aragtaa baaritaanka antigen-ka Ag-RDT inuu yahay bedel la aqbali karo PCR. Iyo, halka imtixaanku yahay shuruud qasab ah, kuwa WHO Xeerarka Caafimaadka Caalamiga ah (IHRs) sheeg in rakaabka iyo xamuullayaashu midkoodna uusan qaadi karin kharashka baaritaanka.
Tijaabadu sidoo kale waxay u baahan tahay inay ahaato mid ku habboon heerka halista. Tusaale ahaan, Boqortooyada Midowday (UK), xogtii ugu dambeysay ee Adeegga Caafimaadka Qaranka ee ku saabsan tijaabinta socdaalka imanaya waxay muujineysaa in ka badan 1.37 milyan oo baaritaanno ah lagu sameeyay dadka ka imanaya waddamada loogu yeero Amber. Kaliya 1% ayaa laga helay afar bilood ka dib. Dhanka kale, ku dhowaad saddex jibaar tirada tirada wanaagsan ee cudurka waxaa lagu ogaadaa dadweynaha guud maalin kasta.
Xogta laga helay dowladda UK waxay xaqiijineysaa in socdaalayaasha caalamiga ah aysan wax khatar ah u lahayn inay soo dhoofsadaan COVID-19 marka loo eego heerarka cudurka ee hadda ka jira dalka. Uguyaraan, sidaa darteed, dowlada UK waa inay raacdaa hagitaanka WHO oo ay aqbashaa tijaabooyinka antigen ee dhaqsaha badan, la awoodi karo, waxtarna leh, iyadoo la adeegsanayo baaritaanka xaqiijinta PCR ee kuwa tijaabiya togan. Tani waxay noqon kartaa wadiiqo u suurta galisa xitaa dadka aan la tallaalin inay u safraan, ”ayuu yiri Walsh.
Dib u bilaabida safarka caalamiga ah waxay muhiim u tahay taageerida 46 milyan ee shaqooyinka socdaalka iyo dalxiiska adduunka oo dhan kuwaas oo ku tiirsan duulista. Daraasaddeenii ugu dambeysay waxay xaqiijineysaa in qiimaha sare ee baaritaanka uu si weyn u xambaari doono qaabka soo kabashada safarka. Macno yar ayey u leedahay dowladaha inay qaadaan talaabooyin ay dib ugu furayaan xuduudaha hadii talaabooyinkaasi ay ka dhigaan qarashka safarka mid dadka intiisa badan laga mamnuuco. Waxaan u baahan nahay dib u bilaabid taas oo qof walba awoodo, ayuu yidhi Walsh.
Cruise Resume: Carnival Sunshine Wicitaanada Ocho Rios ...
Diyaaradda United Airlines: Diyaaradda Korontada Oo Qarka U Saaran Inay Duulimaad ...
Ryanair wuxuu ku helay faa'iido tartan Boeing 737 MAX
Ku booqo Maldives Caawinta Websaydha Tallaalka
Duulimaadkii ugu horreeyay ee rakaab caalami ah ayaa ka duulay ...
Tallaalka Ruushka ee Sputnik V COVID-19 ayaa loo oggolaaday ...
Naples, Marco Island iyo Everglades CVB Fulinta ...